Boorsooyinka nooca dabacsan
maktabadda gorgorka, buug gacmeedka gearbox, qeybaha qalabka wax lagu xirto, iibiyaha gearbox geyiga gudaha Hindiya, dayactirka gearbox maraakiibta, maraakiibta gearbox koonfur afrika, siemens dusha qalabka gearbox, muemens gearbox gear manual
Warshadaha Helical Gearboxes
Sanduuqa culus ee Mashiinka Wejiga culus, Bevel Gearbox, sheybaaraha xawaaraha qalabka, Qeybaha garka gudbinta, guluubka guluubka adag, garsooladaha hepatical, gearbox gearbox Warshadaha Helical, Cutals bear Gear Geals
Naqshadeynta Nooc (Nooc la'aan ah)
P: P taxanaha xawaaraha qalabka dejiyeyaasha
3: Tirada marxaladaha, 1,2,3,4.
S: Wadada soosaarka. S-Solid shaft, H-hollow shaft, D-Hollow shaft oo leh disk ruxid.
H: Wadada fuula, H-Horizontal, M-Horizontal oo aan cago lahayn, V-Vertical
8: Lambarka Moodeelka sanduuqa gear
80: Saamiga isugeynta
A: Qaabka wadada loo maro
Sogears nooca Flender gearboxes wuxuu bixiyaa fallaadho isbarbar socda iyo cutubyo qalab isku dhafan ah oo leh matoorro koronto ama matoorro hawo ah iyo qaar kale. Iyada oo la adeegsanayo heerarkeena saxda ah ee wax soo saarka iyo xakamaynta, gearbox kasta wuxuu ka faa'iideysanayaa codsiyo ballaaran sida sibidhka, macdanta, rariyeyaasha, daaweynta biyaha, warshadaha waraaqaha iwm. Waxaan haynaa in ka badan Shan sano kadib markii aan la wareegnay shirkadda Siemens AG, FLENDER AG. Sanduuqa Generator-ka waxaa loo isticmaali karaa soosaarka qiimaha jaban ee korantada dusha sare. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa matoorrada naaftada oo xawaare hoose ku socda waana la isticmaali karaa.
Faahfaahinta qalabka khafiifka ah ：
waa Hambooyinka warshadaha ee korantada sare ee H tax (awood sare iyo dab culus)
1. HB-ga caadiga ah ee weelka wax lagu xirto wuxuu ku habboon yahay qaab dhismeedka sanduuqa nuugista jirka, aagga dusha sare ee wasiirrada iyo taageere weyn, qalabka dhululubo iyo guluubka beedka wareega. Habka sare ee shiidaalka ayaa loo qaatay si looga dhigo heerkulka kor u kaca, yareynta dhawaaqa iyo howlgalka lagu kalsoonaan karo ee mashiinka oo dhan. Galmada ayaa la wanaajiyey awooda gudbinta ayaa la kordhiyaa.
2. Sanduuqa wershadaha ayaa qaadanaya qorshaha guud ee naqshadeynta si loo xaqiijiyo guryaha la wadaago ee shabag is barbar socda iyo orthogonal shaft. Noocyada qaybaha waa la yareeyey oo faahfaahinta iyo moodooyinka waa la kordhiyey.
3, sanduuqa qalabka ayaa leh 3 ilaa 26 nooc cayiman, tirada marxaladaha gudbinta dhimista waa 1 ilaa 4, saamiga xawaarahana waa 1.25 ilaa 450.
4. Habka rakibidda: rakibidda saldhiga, rakibidda faashad bannaan, rakibidda saldhigga wareejinta, iyo rakibidda gacanta torque.
5. Qaabka gelitaanka: isku xirka isku xirka gawaarida iyo soosaarka ruushka.
6. Qaabka soosaarka: shaati adag oo leh furaha fidsan, guntin hollow leh oo leh furaha fidsan, qulqul hollow leh oo leh isugeyn ballaarani, qulqul hollow leh oo leh isbarbardhiga lafdhabarta, shaati adag oo leh isugeynta laf-dhabarka iyo shaati adag oo leh laab laab laab.
7, waxaa lagu qalabeyn karaa dukaanka gadaal iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Isugeynta taxanaha R iyo K si loo helo saami xawaare weyn.
Xadka xawaaraha: H taxanaha 1.25 ~ 450, taxanaha B 5 ~ 400
Xaddiga Torque: H taxanaha 2 ~ 900 kNm, taxanaha 5.8 ~ 900 kNm
Xaddiga awoodda: taxanaha H ~ 4 ~ 5000 kW, taxanaha B 2.8 ~ 3000kW
Xadka awoodda: Sare illaa 4800KW
Xawaaraha wax soo saarka (r / min): 01- 1200
Natiijada Torque (NM): Sare ilaa 952000N.M
Qaabka Soosaarka: Xariiq isku xijin oo leh xirid xiran, jajab disk, kala bixi, xarig adag iwm.
Naqshad gaar ah oo fudud oo wax soo saar waddan ah, saami yar, waqti gaarsiin gaagaaban.
Dhalista: Heerka Shiinaha. Laakiin SKF, FAG, NSK, TIMKEN, NTN, KOYO, C&U waa la heli karaa haddii loo baahdo
Toosh weyn oo wax soo saar, bilaabid siman, hufnaan sare, wareegga nolosha oo dhaadheer, si toos ah iyo toos ah
Qalabka birta ee saafiga sare leh, caabbinta naxdinta leh ee adag, geesaha muuqaalka leh ee muuqaalka ayaa wanaajinaya awoodda culayska, waxqabadka qaboojinta iyo yareynta codka.
Shaabaddii qaybta soosaarka soosaarka ayaa ku dhejisa shaabad saliid leh labajibbaar saliid leh oo iska caabin badan leh. Isku xirnaanta la isku halleyn karo oo si ballaaran loogu dabaqi karo warshadaha.
Qalabka birta daawaha ah ee daahirnimada sare leh, iska caabin xoogan oo naxdin leh, geerka dhulka ee muuqaalka ayaa hagaajiya awoodda culeyska, qaboojinta iyo buuqa waxqabadka hoos u dhaca, gudbinta xasilloon. Sanduuqyadeenna 'Compact gearboxes' waa gearboxes tayo sare leh oo loogu talagalay darawalada caadiga ah. Mashiinka korontada ku shaqeeya waxaa lagu dhex daraa gearbox hal unug. Waxaan nahay adeeg buuxa, hal-hal-dayactir & dib-u-dhisid xarun ah oo u adeegta baahiyahaaga loogu talagalay sanduuqyada cusub ee loo beddelay Flender Gearbox-kaagii hore ama u baahan Dayactirka & Adeegyada Hard Chrome Plating
Iyadoo la adeegsanayo ku dhowaad 30 sano oo khibrad injineernimada qalabka la isku daro ah, Sogears pwoer gudbinta ayaa adeeg siin karta, dayactiri karta isla markaana cusbooneysiin karta nooc kasta oo gear ah oo ay ku jiraan nooca Flender. Waxaan leenahay khibrad tobanaan sano ah oo ku saabsan dayactirka sanduuqyada nooca Flender ee loogu talagalay macaamiisha warshadaha iyo baddaha adduunka oo dhan. waxaanan noqonay kuwa ugu dhaqsaha badan, adeegga buuxa, khabiir ku takhasusay adduunka oo dhan hagaajinta gearboxes nooca Fndernder gearboxes ah.
• Wareejiyeyaasha & Mashiinnada Cuntada • mashiinnada gaadiidka
• Isku qasan • Coat & Mining • Dhir digaag • Qalabka dhismaha
• Kiniiniyada Waraaqaha • Mashiinnada dib loo warshadeeyo • Quudiyeyaasha Rotary • Korantada iyo tamarta
• Saarista, qaadista • Dakada & dhismaha markabka • Sibidhka & walxaha • Awooda korantada & tamarta
• Macdanta dhuxusha • Daweynta biyaha wasakhda ah • warshadaha kiimikada ah - wadayaasha aaladda isku qasan ee toosan
1. Leh sannado badan oo waayo-aragnimo wax soo saar ah.
2. Waxaan nahay soo-saare, waxay leedahay xuquuqda madax-bannaan ee dhoofinta, qiime ka fiican, xakamayn kara tayada iyo waqtiga keenista.
3. Injineero xirfad leh oo ku saabsan nashqadeyntaada, sawirkaaga, hubi tayada wax soo saarka haddii alaabada aan caadiga ahayn.
4. Sawirada iyo filimada nidaamka socodsiinta ayaa lagaa soo sheegi doonaa.
5. Muddada dammaanadda waa 12 bilood.
Waxaan nahay Khabiiro Gearbox Warshadeed oo ka socda Shiinaha, iibinta noocyada buuxa ee Gearboxes sida Flender. Waxaan leenahay shaqaale Iibinta aduunka oo dhan sida ugufiican adeega iibka kadib. Qalabkeenna gearboxes-ka ayaa kala go'ay Flender, waxaa sannado badan loo isticmaali jiray codsiyada warshadaha iyo badda, tusaale ahaan warshadaha kiimikada, dhismaha maraakiibta iyo suuqa tamarta dabaysha. Stork Gears & ilmo aad u tiro badan oo tobaneeyo sano oo khibrad ah u leh dayactirka sanduuqyada khafiifka ah ee warshadaha iyo badda.
Dhamaan moodooyinka noocan ah:
Dhamaan moodooyinka noocan ah ee Flender's:
Qalabka Helical, Bevel gear